Milaza ny fikarohana fa azo nosorohana ny 95% n’ny tranga coronavirus tany Shina · Global Voices teny Malagasy
Milaza ny fikarohana fa azo nosorohana ny 95% n'ny tranga coronavirus tany Shina
Tsy nampiharin'ny governemanta avy hatrany ny fepetra tokony ho nataony
Voadika ny 26 Marsa 2020 4:19 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, Français, Español, македонски, Ελληνικά, українська, Română , 繁體中文, عربي, polski, English
Sary avy amin'ny governemantan'i Hong Kong tao amin’ ny HKFP.
Ny lahatsoratra eto dia nosoratan'i Tom Grundy ary navoaka tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 14 Marsa 2020. Navoaka indray ato amin'ny Global Voices izany noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Araka ny fikarohana vao haingana nataon'ny Oniversiten'i Southampton, dia afaka nisoroka ny 95 isan-jaton'ny aretina coronavirus i Shina raha nanomboka telo herinandro mialoha ireo fepetra noraisiny mba hifehezana ny valan'aretina, ny faran'ny volana Janoary vao nandray fepetra henjana i Shina – herinandro maro taorian'ny fanampenam-bava nataon'ny polisy tamin'ilay dokotera niezaka nanao ny fanairana.
Nandrefy ny fahombiazan'ny fidiran'ny an-tsehatra tsy mampiasa fanafody ny fikarohana, izay navoakan'ny vondrona fandraketana an-tsarintany WorldPop ao amin'ny Oniversiten'i Southampton. Nanadihady ny fomba nataon'i Shina tamin'ny fanokana-toerana ireo olona marary sy ny fanokana-toerana ireo olona ahiahiana, ny fitadiavana ireo olona tratran'ny otrikaretina, ny famerana ny fifindran-toerana, ny fanakatonana sekoly sy ny toeram-piasana ary ny fanafoanana ireo fivorivoriana ny mpikaroka.
Nahita ny fanadihadiana izay mbola hodinihana sy ho ankatoavin'ireo mpikaroka hafa fa fomba mahomby amin'ny fifehezana ny valan'aretina ny fahitana ny tranga mialoha sy ny fampihenana ny fifandraisana ary afaka mampihena ny fifindran'ny aretina ny fanakambanana ireo fepetra. Afaka manatara sy mametra ny halehiben'ny valan'aretina ihany koa ireo, ary noho izany ahafahana manana fotoana amin'ny fiomanana ara-pitsaboana sy ny fikarohana fanafody.
Natao tamin'ny angon-drakitry ny fivezivezen'ny olona sy ny aretina ny fanoharana mba hamolavolana ny mety ho fiantraikan'ireo fidirana an-tsehatra nitambatra amin'ny fiparitahan'ny Covid-19.
Afaka nahena hatramin'ny 66 isanjato ny tranga coronavirus raha noraisina herinandro mialoha ireo fepetra, araka ny voalazan'ny fikarohana, ary nihena hatramin'ny 86 isanjato raha natomboka tapa-bolana mialoha ny hetsika. Raha noraisina telo herinandro taty aoriana ny hetsika, dia mety niharatsy in-18 heny ny toe-javatra.
Nanampim-bava ilay mpanao ampamoaka Dr. Li Wenliang
Natao ny faran'ny volana Janoary ny ankamaroan'ny ezaka hiadiana amin'ny valan'aretina, herinandro maromaro taorian'ny ezaka fanairana momba ny aretina hafahafa nataon'ny Dr. Li Wenliang, mpitsabo maso, tamin'ny 30 Desambra. Anisan'ireo olona valo nosazian'ny polisy tamin'ny 1 Janoary izy noho ny fanapariahana “tsaho” momba ny valan'aretina.
Nasain'ny Biraon'ny Fiarovam-bahoaka nanasonia taratasy i Li fa nanao “fanambarana diso” sy “nanakorontana ny filaminam-bahoaka”. Namoy ny ainy noho ilay aretina izy tamin'ny volana lasa teo, teo amin'ny faha-34 taonany ary niteraka fahatezerana marobe tao Shina.
Araka ny filazan'ny New York Times, dia tsy noraharahian'i Shina ihany koa ny fanampiana avy amin'ny Foibe Amerikana momba ny fanarahamaso sy fisorohana aretina sy ny avy amin'ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fahasalamana tamin'ny volana Janoary.
Areti-mahatratra firenena sy kaontinanta maro
Satria nosokajiana ho areti-mahatratra firenena sy kaontinanta (pandemika) ankehitriny ny valan'aretina, nanatsoaka hevitra ireo mpikaroka ao amin'ny Oniversiten'i Southampton fa tokony hitohy mandritra ny volana vitsy manaraka ireo fepetra tsy fifampikasohana ara-piarahamonina ary tokony ampiharina na aiza na aiza faran'izany haingana ny fepetra noraisin'i Shina.
“Azo antoka fa nahafahana nisoroka ny toe-javatra ratsy indrindra ny fepetra henjana sy amin'ny endrika maro noraisin'i Shina, izay mety nanafaingana ny fiparitahana manerantany», araka ny filazan'ny fikarohana.
Jereo ny fitantarana manokana ataon'ny Global Voices momba ny fiantraikan'ny COVID-19 manerantany